Indlu ye-Oak kwiMbali uJean Lafitte - I-Airbnb
Indlu ye-Oak kwiMbali uJean Lafitte
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguTommy
Yiza uzokuphumla kwindawo ezolileyo, engqongwe yi-oki ephilayo eneminyaka elikhulu ubudala. Iipropathi zikaJean Lafitte zilandela ecaleni kweBayou Barataria etyebileyo ngezona zinto zintle, zintsha zokutya kwaselwandle. Kukho i-bayous ekufutshane kunye namachibi okuloba kunye nemidlalo yasemanzini. Uhambo lwasekuhlaleni lubandakanya ukhenketho kwimigxobhozo, uhambo lokuloba oluqeshiweyo, iindlela zendalo, kunye nokufikelela kwisikhephe esikufutshane. Indlu, ekwiikhilomitha nje ezingama-25 ukusuka kwikota yesiFrentshi yaseNew Orleans kunye neSitalato saseBourbon yindawo egqibeleleyo yokubalekela iminyhadala kunye neMardi Gras.
Indlu isandula ukwakhiwa ngo-2020 kunye nezixhobo zangoku kunye nefenitshala. Indawo iya kuhlala ukuya kwiindwendwe ezi-6; Inkosi inebhedi enkulu, kwaye igumbi lesibini linebhedi enye kunye nebhedi egcweleyo. Indlu iphakanyisiwe, kwaye ngaphantsi kukho ikhitshi langaphandle elinefriji, i-Gas grill kunye ne-charcoal grill, imbiza ebilayo yamathumba okutya kwaselwandle, kunye nendawo yokuhlamba. Kukho neendawo zokuhlala phantsi kwendlu ezijonge ii-oki zokuphumla kwangaphandle. Indlela yokuqhuba inendawo eyaneleyo yokupaka isikhephe kunye netreyila, kwaye ukuqaliswa koluntu kukumgama oziikhilomitha ezi-2 kuphela. Ikhitshi igcwele zonke izinto ezibalulekileyo zokupheka ukuze ukonwabele ukutya okuphekwe ekhaya ngexesha lokuhlala kwakho. Awufuni ukupheka, akukho ngxaki, le ndawo ikude nemizuzu ukusuka kwiindawo zokutyela ezininzi ezibalaseleyo. Zonke ezinye izinto eziyimfuneko esele zikulindile ukuba wenze oku kungekuphela nje ukonwabela, kodwa ukuhlala okungenangxaki kwaye ufumane okuninzi kusapho lwakho kunye nabahlobo.
Iindwendwe zingaqhagamshelana nombuki zindwendwe ngalo lonke ixesha lokuhlala ngayo nayiphi na imibuzo. Sihlala ngaphakathi kwemizuzu emi-5 kwaye siya kufumaneka ngefowuni okanye ngetekisi nangaliphi na ixesha, kodwa kungenjalo siya kukunika indawo yakho.
Iindwendwe zingaqhagamshelana nombuki zindwendwe ngalo lonke ixesha lokuhlala ngayo nayiphi na imibuzo. Sihlala ngaphakathi kwemizuzu emi-5 kwaye siya kufumaneka ngefowuni okanye n…